Ihowuliseyili GQ-KG (L) / 01/02 Cable Grouting Agent mveliso kunye nabenzi | Gaoqiang
I-GQ-KG t inezinto zokukhulisa ezincinci, ukusebenza okuphezulu kokunciphisa amanzi, izinto ezahlukeneyo ezingaphiliyo kunye nezinto eziphilayo ze-polym kunye ne-PO, i-42.5 yesamente. Fluidity egqwesileyo, oluludaka oluzinzileyo, inqanaba lokugcwalisa elungileyo, akukho ukuncipha, ukwanda okuncinci, akukho zinto ziyingozi ekomelezeni. Zizinto zokugungxulelwa koxinzelelo lwangaphambi koxinzelelo lwamajelo, amalungu kunye namalungu amalungu ekhonkrithi. Umgangatho wemveliso uyahlangabezana neemfuno ze-TB / T3192-2008, JTG / TF 50-2011 kunye neminye imigangatho
1.With fluidity ezibalaseleyo kunye nelahleko ixesha elincinci, kulula ukuba ucofe ukusebenza yintlama
Iziphumo zokuphucula zicacile. Uncolo lunamandla aphezulu (> 50MPa) kunye nokubambelela okuhle emva kokuqaqadeka
Akukho shrinkage okanye ulwandiso emva kokubetha, uzinzo lwevolumu elungileyo
I-4.I-slurry ayiphumeli gazi, inokugcina ixesha elide lokusebenza, isidanga sokugcwalisa isilungile
5.I-alkali ephantsi, akukho kubola kwentsimbi. Ayiyityhefu, ayinabungozi, ikhuselekile kwimpilo nakokusingqongileyo
Zonke iintlobo zeendlela zikaloliwe kunye nomgaqo wendlela omkhulu
Itonela grouting yezakhiwo ezinkulu zangaphambi koxinzelelo
3. Ukucoca isihogo kumzi-mveliso wamandla enyukliya
4. Yeka ukuvuza okuguqulweyo kumalungu ezakhiwo ezahlukeneyo zekhonkrithi
1.Ulawulo lomlinganiselo wesamente wamanzi KG (L) 01≤I-0.33, i-KG (L) 02≤0.28 emiselwe luvavanyo ngaphambi kokusetyenziswa
2. Ngokuya ngomlinganiselo wokuxuba oxeliweyo wokuxuba, ixesha lokuxuba alikho ngaphantsi kwemizuzu emi-4 ~ 5, kufuneka lihambelane neemfuno zokuvuselela, ukongeza amanzi ukusebenzisa iindlela ezimbini
3.Impompo yokugungxula kufuneka icocwe kwangaphambili ngaphambi kokugutywa. I-slurry kufuneka iqhubeke ishukunyiswa ukuze kugcinwe ukufana kunye nokutyibilika kweslurry. I-slurry kufuneka igcwaliswe kwimizuzu engama-30
Impompo yoxinzelelo lwePiston kufuneka isetyenziselwe ukugungqa, kwaye uxinzelelo lokugungxula akufuneki lube ngaphezulu kwe-0.6mpa
Iintlobo ezahlukeneyo zesamente ezivela kwiindawo ezahlukeneyo zokuvelisa zinempembelelo enkulu kwisiphumo sesicelo searhente yokugungxula. Kuyacetyiswa ukuba elona xabiso lokuxuba leentlobo zesamente kunye nearhente yokugungqa kufuneka ichongiwe kuvavanyo ngaphambi kokusetyenziswa. Zama ukukhetha iintlobo zesamente ngokulungelelanisa okuhle, ukuncipha kunye namandla aphezulu
Iphakheji kunye nokuGcina
Le mveliso ingumgubo, ipakishwe kwiingxowa zeplastiki ezenziwe ngefilimu, i-40kg / ingxowa okanye i-50kg / ibhegi
Ukumelana nemvula, ukufuma kunye nomonakalo, kusebenza kangangesiqingatha sonyaka. Iimveliso ezingatshiyo kunye neziqhushumbo ziya kugcinwa ngokufanelekileyo
Egqithileyo Ummeli we-Antifreeze ye-GQ-208